Minecraft मा सर्कल कसरी बनाउने मोबाइल फोरम
क्रिस्टियन गार्सिया | 30/09/2021 11:25 | खेल
तपाइँ प्रसिद्ध 3D क्यूब्स खेल को एक खेलाडी हुनुहुन्छ र तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ Minecraft मा एउटा सर्कल? हामी पहिले नै जान्दछौं कि यो एक खेल हो कि विभिन्न उमेर को मान्छे एक धेरै जस्तै हो। तर यो पनि एक धेरै रोचक खेल हो किनकि यो यसको खेलाडीहरु को लागी संभावनाहरु को एक भीड प्रदान गर्दछ। यो एक पूर्ण स्यान्डबक्स हो कि तपाइँ अन्वेषण गर्न को लागी जब सम्म तपाइँ थकित हुनुहुन्न र तपाइँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ।
र यो हो कि Minecraft मा तपाइँ संसारमा तपाइँले चाहानु भएको सबै चीज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँसँग उपकरण को एक भीड हुनेछ जसको साथ तपाइँ समस्या बिना टोपी बाट चीजहरु बाहिर पाउनुहुनेछ। रचनात्मकता के सीमा राख्छ, तेसैले तपाइँ तपाइँको संसार को बारे मा निर्णय। तपाइँ प्रभावशाली चीजहरु बनाउन सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाइँ घन स्यान्डबक्स को एक अनुभवी खेलाडी हुनुहुन्छ, तपाइँ जान्नुहुन्छ कि हामी के बारे मा कुरा गरीरहेका छौं। किनभने सबैभन्दा अनुभवी पहिले नै धेरै सुन्दर र विशेष चीजहरु देखेको छ, वा पनि शानदार हुनेछ। डिजाइन र आर्किटेक्चर 10 जस्तै कैथेड्रल, पुल वा सबैभन्दा सुन्दर शहर हो कि तपाइँ बनाउन चाहानुहुन्छ।
तर चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यदि तपाइँ बाट हुनुहुन्छ ती जो यो लेख शुरू गरीरहेका छन् तपाइँलाई पनि मद्दत गर्दछ। हामी यो सुनिश्चित गर्न को लागी जाँदैछौं कि तपाइँ केहि चालहरु जान्नुहुन्छ ताकि तपाइँ तपाइँको स्यान्डबक्स मा राम्रो संग शुरू गर्नुहोस् र तपाइँको दुनिया बिना रोकिन्छ। तपाइँसँग बिभिन्न भिडियो र स्ट्रिमि platforms प्लेटफर्महरुमा सयौं ट्यूटोरियल छन् तर हामी २ भागहरु मा विभाजित एक धेरै सरल गाइड बनाउन जाँदैछौं: Minecraft को बाहिर सर्कल बनाउनुहोस् र त्यसपछि जान्नुहोस् कि कसरी यो धेरै सटीक 2D सैंडबक्स भिडियो खेल को लागी तपाइँ लाई मनपर्छ कि पास गर्न को लागी। धेरै। तर चलो त्यहाँ Minecraft मा सर्कल कसरी बनाउने भनेर व्याख्या गर्न को लागी।
Minecraft मा सर्कल कसरी बनाउने?
सिद्धान्त मा यो एक धेरै सरल प्रविधि हो कि मात्र तपाइँलाई सोध्नेछ बाहिरी कार्यक्रम भनिन्छ रंग। तपाइँ मध्ये धेरैलाई थाहा हुन सक्छ, किनकि यो सबैभन्दा प्रसिद्ध विन्डोज प्रोग्रामहरु मध्ये एक हो कि यी सबै बर्षहरु को दौरान हामी संग छ। यो एक धेरै सरल चित्र र सम्पादन कार्यक्रम हो कि तपाइँ तपाइँको पीसी मा स्थापित हुनु पर्छ। तपाइँ यसलाई विन्डोज सामान भित्र पाउनुहुनेछ। एक पटक तपाइँ यो जान्नुहुन्छ, यो मात्र Minecraft मा एक सर्कल बनाउन को लागी सीधा गाइड मा जाने को लागी रहन्छ।
शुरू गर्न को लागी तपाइँ जानु पर्छ जस्तै हामी विन्डोज स्टार्ट र सामानहरु लाई भन्यौं र पेंट कार्यक्रम खोल्नुहोस्। पागल नहुनुहोस् यदि तपाइँ यसलाई कहिल्यै खोल्नुभएको छैन किनकि यो धेरै सरल छ र तपाइँ यसलाई देख्नुहुनेछ जतिसक्दो चाँडो तपाइँ यसको इन्टरफेस संग प्रविष्ट गर्नुहोस्। तपाइँ माथिल्लो बायाँ मा देख्नुहुनेछ त्यहाँ बिभिन्न उपकरणहरु छन् र तल तपाइँ एक सेतो कैनवास पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ यो एउटै क्यानभास को दाहिने कुनामा थिच्नु हुन्छ तपाइँ यसलाई तान्न सक्नुहुन्छ यो अधिकतम गर्न को लागी विस्तार गर्न को लागी। जस्तो कि तपाइँ जुम गर्दै हुनुहुन्छ।
अब तपाइँ इन्टरफेस मा खोज्न को लागी हुनेछ आकार खण्ड र एक काफी पतली मोटाई आकार संग अण्डाकार छान्नुहोस्। जब तपाइँ चाहानुहुन्छ तपाइँ अण्डाकार वा सर्कललाई क्यानभास संग क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र थिच्न बिना रोक्न वा क्लिक जारी नगरी तपाइँ यसलाई बाहिर सार्नु पर्छ। तपाइँ देख्नुहुनेछ कि सर्कल बढ्न शुरू हुन्छ जब सम्म तपाइँ आकार कि तपाइँ चाहानुहुन्छ बनाउन। यदि तपाइँ एक चाल यो वर्दी बनाउन को लागी तपाइँ कीबोर्ड मा शिफ्ट बटन थिच्न सक्नुहुन्छ। यस तरिका मा यो सँधै उस्तै हुनेछ र तपाइँ कुनै पनी आकार कि तपाइँ सिर्जना संग समस्या हुनेछैन।
अब सर्कल बनाईएको छ र केहि जूम संग तपाइँ चित्र को पिक्सेल देख्न सक्नुहुन्छ। पेन्सिल उपकरण लिनुहोस् र सर्कल को शीर्ष मा कोर्नुहोस् जूम बिना हेर्न को लागी कति पिक्सेल चित्र को प्रत्येक लाइन छ सक्षम हुनुहोस्। एक टिप को रूप मा, हामी तपाइँलाई भन्छौं कि तपाइँ सर्कल को माथिल्लो माथि एक रेखा कोर्नु पर्छ र यस तरीकाले तपाइँ पिक्सेल लाई अझ राम्रो संग गणना गर्न सक्नुहुन्छ कि लाइन आफैं बनाउनुहोस्।
कसरी पेन्ट बाट Minecraft सर्कल पास गर्ने?
अहिले हामीसँग पचास प्रतिशत काम सकिएको छ। हामी मात्र जान्न को लागी कसरी हाम्रो घन 3D घन स्यान्डबक्स, Minecraft को लागी एक टेम्पलेट को रूप मा पारित गर्न को लागी आवश्यक छ। यस को लागी र जस्तै कि हामीले गर्न को लागी पहिले गरी सकेका छौं एक सानो गाइड कि तपाइँ कदम बाट कदम को पालन गर्न को लागी हुनेछ। यो हानिकारक वा जटिल छैन, तपाइँ मात्र यो गाइड को एक सानो को रूप मा तपाइँ अब सम्म गरीएको छ र जब तपाइँ कम्तीमा यो तपाइँको माइनक्राफ्ट मा बनाईएको तपाइँको सर्कल को पालन गर्न को लागी हुनेछ। चिन्ता नगर्नुहोस् किनकि यो मात्र एक पिक्सेल बाट अर्को पिक्सेल को संख्या स्थानान्तरण गरीरहेको छ। गाइड को भाग दुई संग त्यहाँ जानुहोस्:
Minecraft मा सर्कल संग शुरू गर्न को लागी तपाइँले गर्नु पर्छ हात मा रंग को चित्र छ जसमा तपाइँ पिक्सेल गणना गरीएको छ। एकचोटि तपाइँसँग यो छ, तपाइँ Minecraft मा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र ठाउँ जहाँ तपाइँ सर्कल बनाउन चाहानुहुन्छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाइँले ठाउँ पाउनुभयो तपाइँ Minecraft क्यूब्स पिक्सेल अनुसार तपाइँ पेन्ट मा गणना गरीरहनु भएको छ र सही दिशा मा तपाइँलाई चाहिन्छ भनेर राख्न शुरू गर्न सक्नुहुन्छ। खातामा ठाउँ लिनुहोस् जहाँ तपाइँ सर्कल धेरै राम्रोसँग राख्न चाहानुहुन्छ किनकि तपाइँ पिक्सेल गणना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाइँसँग कुनै ठाउँ छैन, तपाइँ आधा छोड्नुहुनेछ र तपाइँले अर्को ठाउँमा सुरु गर्नुपर्नेछ। र त्यो एक लामो समय लाग्छ।
अब तपाइँ पनी पिक्सेल मा उही दिशा वा अभिविन्यास मा बिस्तारै क्यूब्स राख्न को लागी आफैंलाई समर्पित गर्नुपर्नेछ। कि तपाइँ पेंट मा आकर्षित गरीएको छ। बिस्तारै बिस्तारै तपाइँ देख्नुहुनेछ कि कसरी Minecraft सर्कल आकार लिन्छ र तपाइँ तपाइँको अन्तिम लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। यो एक थकाइलाग्दो तथ्य यो हुन सक्छ कि यदि तपाइँ पिक्सेल कोर्नु र गणना गर्न को लागी तपाइँको पीसी मा एक दोस्रो स्क्रीन छैन, तपाइँ टेबल गर्न वा माइनक्राफ्ट को बाहिर र बाहिर जाने वाला छ। किनकि अन्यथा, हामी तपाइँलाई आश्वासन दिन्छौं कि तपाइँ संख्या गुमाउनुहुनेछ र अन्त मा Minecraft सर्कल सही हुनेछैन। ढाँचा तपाइँ धेरै राम्रो पेंट मा बनाईएको पालना गर्नुहोस्, तपाइँ मात्र त्यो गर्न को लागी छ।
एक अन्तिम चाल को रूप मा, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ सर्कल को बीच मा खडा र क्यामेरा उठाउन को लागी यदि यो ओभरहेड थियो र यस तरीकाले तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि सर्कल कसरी बनाईएको छ। यदि तपाइँ विचलित हुनुहुन्छ भने तपाइँ यसलाई धेरै छिटो महसुस गर्नुहुनेछ र तपाइँ सुधार गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। किनकी दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाइँ केहि मा असफल हुनुहुन्छ तपाइँ केहि हदसम्म जलाउनुहुनेछ र तपाइँ त्यो भाग बाट शुरू गर्न को लागी हुनेछ। तपाइँ यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ यदि तपाइँ एक धेरै ठूलो सर्कल बनाउनुभएको छ, तपाइँसँग अधिक पिक्सेल हुनेछ र यसैले यसको मतलब यो हो कि तपाइँ अधिक क्यूब्स राख्न को लागी र अधिक समय बिताउन को लागी सटीक हुनु आवश्यक छ।
हामी आशा गर्दछौं कि यो लेख Minecraft सर्कल बनाउन को लागी उपयोगी भएको छ र यदि हो भने, यसलाई टिप्पणी मा छोड्नुहोस्। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ भने तपाइँ यसलाई छोड्न को लागी टिप्पणी बक्स को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ र हामी पढे र सकेसम्म चाँडो तपाइँलाई जवाफ दिनेछौं। अर्को मोबाइल फोरम लेख मा भेटौंला।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » खेल » कसरी Minecraft मा सर्कल बनाउने
तपाइँ किन विन्डोज मा सफारी को उपयोग गर्नुहुन्न